विन्डोज १० ले प्रतिस्पर्धाबाट अपनाउनु पर्ने पाँच विचारहरू ग्याजेट समाचार
विन्डोज १० छ प्रत्येक दिन अन्त प्रयोगकर्ताको नजिक। यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। व्यावहारिक हिसाबले हरेक दिन नयाँ जानकारी Windows 10 के हुनेछ र के हुँदैन भनेर देखा पर्छ, र यी समाचारहरूमा तपाइँले एक सुखद आश्चर्य पाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि, हालसालै यो जानिएको थियो कि विन्डोज १० मा एउटा सूचना केन्द्र हुनेछ, जुन लामो समयदेखि लिनक्स डेस्कटपहरूमा सामान्य रहेको छ।
जहाँसम्म, र यो एक राम्रो विचार हो, विन्डोज १० को लागि अन्ततः अधिक प्रयोगयोग्य, प्रयोगकर्ता मैत्री र कुशल अपरेटिंग प्रणाली बन्न, हुनसक्छ उनीहरूले अगाडि अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसैले हामीले यो सूचि तयार गरेका छौं पाँच विचार विन्डोज १० ले प्रतियोगिताबाट लिनुपर्दछ.
1 नि: शुल्क स्थापना छविहरू
2 नि: शुल्क अपडेटहरू
3 डेस्कटपमा अनुप्रयोग स्टोर
5 नयाँ दृश्य डिजाइन
नि: शुल्क स्थापना छविहरू
उदाहरणको लागि हेर्नको लागि तपाईंले टाढा हेर्नु हुँदैन जुन यो बुझ्छ। धेरै लिनक्स वितरणहरू प्रयोगकर्ताहरूका लागि निःशुल्क हुन्, र मार्क शटलवर्थ (उन्बुन्टुकी आमा कम्पनीको महान मालिक) जस्ता उद्यमीहरूका अनुसार। पैसा अपरेटिंग प्रणालीमा छैन, तर प्राविधिक समर्थन प्रस्तावमा भने पेशेवरमा भने प्रणालीमा (जुन जहाँ उब्न्टुले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा पाउँदछ)।
किन तिनीहरू माइक्रोसफ्टमा यस्तै रुख लिन सक्दैनन्? यो भन्न गाह्रो छ, र अधिक यदि हामीले विचार ग consider्यौं भने यदि हामी विन्डोज फोन खरीद गर्छौं (एक स्वामित्व इजाजतपत्रको साथ एक अपरेटिंग प्रणालीको साथ) हामी थप भुक्तान गर्दैनौं अपरेटिंग प्रणाली द्वारा। एन्ड्रोइडको साथ पनि यस्तै हुन्छ।
किनकि यो पहिलो पटक टिप्पणी गरिएको थियो कि विन्डोज १० मा अपडेट विन्डोज users प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क हुन सक्दछ, यो मुद्दा वरिपरि भएको छ। एप्पलले पहिले नै म्याक कम्प्युटर किनेका मालिकहरूलाई अपरेटि system प्रणालीमा निःशुल्क अपडेट प्रस्ताव गर्दछ। लिनक्समा यदि तपाईसँग संस्करण छ, उदाहरणका लागि, ओपनसूस, यदि नयाँ जारी गरिएको छ भने तपाई समस्या बिना र खर्च बिना प्रणाली अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। एक पैसा डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टमको संसार परिवर्तन हुँदैछ र पहिले नै हो तानाशाही निर्माणकर्ताहरूको लागि रिडआउट होइन यो के थियो? कम्पनीहरूले उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरू नजिक जानुपर्दछ, र यो वर्तमान प्रवृत्ति हो जुन पछ्याईदै छ।
डेस्कटपमा अनुप्रयोग स्टोर
दुबै ओएस एक्स र लिनक्स धेरै केसहरूमा अपरेटि system प्रणाली भित्र एप्लिकेसन स्टोर समावेश गर्दछ। यो हुनु विशेष गरी उपयोगी छ पत्ता लगाउन र स्थापना गर्न सजीलो पहुँचयोग्य भण्डार सफ्टवेयर, जसले इन्टरनेटमा प्रोग्राम खोजी गर्ने काम, डाउनलोड गर्ने र स्थापना गर्ने कार्यको तुलनामा धेरै समय बचत गर्दछ।
अनुप्रयोग स्टोरको साथ हामी विज्ञापनबाट पनि छुटकारा पाउँछौं, र यो संक्रमित हुने संभावनाहरूलाई कम गर्दछ मालवेयर। यसले गिटहब वा सोर्सफोर्स जस्ता विश्वस्त बाह्य भण्डारहरू थप्न पनि अनुमति दिनुपर्दछ जसले बाह्य कार्यक्रमहरूको स्थापना सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ।
अब यदि एक अनुप्रयोग स्टोर शामिल छ तिनीहरूको संस्करणहरू सकेसम्म अद्यावधिक हुनुपर्दछ। उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टरलाई उदाहरणको रूपमा लिनु, यो एकदम अनौंठो कुरा हो कि उनीहरूको Eclipse IDE को संस्करण 3.73..4.4.1 छ र विकास वातावरणको आधिकारिक पृष्ठमा तिनीहरू पहिले नै XNUMX.१ मा छन्। यी पक्षहरूलाई अधिक ध्यान दिनुपर्दछ।
माइक्रोसफ्टमा तिनीहरू एकल अपरेटिंग प्रणालीको माध्यमबाट सबै विन्डोज उपकरणहरू समेकित गर्न पागल हुन्छन्। निस्सन्देह, त्यो बाहेक, केहि अरू आवश्यक हुन्छ। यो एप्पलले कन्टिन्युइटी, एक उपकरणको साथ हासिल गरेको हो आईफोन वा आईप्याडलाई प्रयोगकर्ताको आईम्याक वा म्याकबुकसँग एकीकृत गर्दछ र यसले कम्प्युटर सूचनाहरू मार्फत परामर्श गर्न अनुमति गर्दछ जुन फोनमा प्रयोगकर्तामा पुग्न र यसको विपरित।
त्यो माइक्रोसफ्ट समान केहि आयो कि सबै तिनीहरूका उपकरणहरू एकीकृत गर्न संगै आएको थियो एक विशाल कदम र केहि धेरै आवश्यक, किनकि अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो कम्प्युटरबाट उनीहरूको मोबाइल टर्मिनलहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम हुने माग गर्दछन्।
नयाँ दृश्य डिजाइन
यो अन्तिम पोइन्टले अधिक गर्न सक्दछ एप्पलले योसेमाइटले के गरेको छ, जहाँ तिनीहरूले इन्टरफेस को अनुहार धोए प्रयोगकर्ता र आइकनहरूको, तिनीहरूलाई अधिक दिने फ्लैट जुन हालसालै धेरै फेसनल देखिन्छ।
सत्य यो हो कि विन्डोजमा, केहि सानो परिवर्तनको एक बाहेक, विन्डोज भिस्टा पछि हामीसँग इन्टरफेसको नयाँ डिजाइन छैन वा आइकनहरू, केहि चीज जुन हालको डिजाइन प्रवृत्तिले शायद तपाईंले माइक्रोसफ्ट जाँच गर्नुपर्नेछ।
अहिलेसम्म हाम्रो पाँच प्रस्तावहरू जुन विन्डोज १० लाई अधिक समुदाय र अधिक उपयोगी र उपयोगी बनाउनका साथै प्रयोगकर्ता समुदायले बढी मूल्यवान् बनाउँछ। यदि तपाईं अझ बढि थप्नुहुन्छ वा हामी प्रस्ताव गर्नुभएकाहरूसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईंको रायसहित हामीलाई एक टिप्पणी दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » पाँच विचारहरु विन्डोज १० ले प्रतिस्पर्धाबाट अपनाउनु पर्छ